Warshada Dharka & Dharka Dharka | Shiinaha Kabaha & Fashions Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Bandana gaar ah oo leh qaab daabacan ama naqshad ama astaan ​​shirkadeed oo ku dul yaal ayaa shaqo weyn ka qaban kara kor u qaadista ganacsigaaga! Dhanka kale, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa wajiga wajiga si looga hortago boodhka iyo hawada wasakhaysan. Waa dhiirrigelinta bannaanka ugu fiican ee loogu talagalay orodyahannada, socodka, socodka, baaskiiladaha, iyo kuwa jecel jimicsiga dhammaan noocyada.
Isku dayida inaad soo jiidato dareenka garoonka? Marabtaa inaad kobciso summad iyo magac naftaada? Soo rar sawirada aad jeceshahay ama astaantaada oo noo sheeg fikradahaaga naqshadeynta hadda, waxaan u qaabeyn doonnaa gacmo-gacmeedka sida aad u rabto! Midab buuxa oo lagu daabacay polyester jilicsan oo jilicsan, gacmaheena gacmaha ayaa ku habboon dhacdooyinka isboortiga, hadiyadaha shaqaalaha, iyo wixii la mid ah.
Dharka Miiska Qoyska ee Caadiga ah
Ma jiraan waxyaabo badan oo aad uga xiiso badan marka la isku soo ururiyo miiska si qoys ama asxaab loola cunteeyo. Maryaha miiska noo gaarka ah ayaa kaa caawin kara abuurista jawi ka sii wanaagsan oo ka diiran. Waad ku daabacan kartaa sawirro, qoraal ama naqshado aad jeceshahay. Qaabab kala duwan iyo qaabab kala duwan oo dharka lagu qurxiyo ah, marada miiska ayaa qurxin wanaagsan u leh muuqaallo kala duwan sida casho rasmi ah, dabaaldegyo dhalasho, iyo dhammaan noocyada xafladda mawduuca.
Daboolida Sofa Custom
Ma rabtaa hab deg deg ah, fudud oo dhaqaale oo aad dib ugu qurxiso una noolaato gurigaaga? Daboolka fadhiga ah ee la kala bixin karo ma bixin karo oo kaliya muuqaal cusub oo ku saabsan fadhigaaga, wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad ka ilaaliso sariirtaada ilmada maalin kasta, daadashada, qashinka iyo wixii la mid ah. Waa xulasho weyn guryaha loogu talagalay carruurta iyo xayawaanka guriga ku jira. Waana caag adag sababtoo ah dharka fidsan iyo naqshadeynta balastikada, sidaas darteed, waxay ku habboon tahay noocyada / qaababka badan ee fadhiga oo waxay kuu abuuri kartaa aragti qallafsan adiga.
Khaanadaha daabacan ee Custom
Koofiyadaha waa u fiican yihiin inay nadiif kaa dhigaan kana hortagaan noolaha. Macawisyadeenna waxaa si gaar ah loogu daabici karaa naqshadahaaga, qoraalkaaga ama astaamahaaga, sidaa darteed, ma aha oo keliya aalad wanaagsan in lagaa ilaaliyo nadaafadda markaad wax karinayso ama aad qabanayso shaqada beerta, waxay sidoo kale kaa caawin kartaa kor u qaadida ganacsigaaga.
Dharkeena madaxa ayaa ka samaysan polyester jilicsan oo jilicsan. Waxaa loo isticmaali karaa sida maaskaro wajiga, bandana, curcurka, dabool, timo xir. iwm oo leh sawirro ama astaan ​​aad jeceshahay in lagu dul daabaco. Waxay noqon kartaa qalab moodo iyo waliba qalab soo jiidasho leh si sumaddaada loo aqoonsado.
Garbasaarrada daabacan ee khaaska ah waa hab gaar ah oo casri ah oo lagu xiro naqshadahaaga. Shaar khaas ah ayaa sidoo kale ah hab fantastik ah oo lagu soo bandhigo sumaddaada ama astaamaha naqshadeeye. Kaalay oo dooro qaababkaaga, naqshadahaaga ama sawirradaada si aad qaabkaaga ugu qaadatid gacmahaaga Nadiifyadayada daabacan.